कक्षा ९ मा अध्ययनरत करिश्मा मानन्धरको पीएचडी गर्ने धोको - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १९ चैत्र २०७४, सोमबार ०२:१६ |
काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टीमा लागेपछि करिश्मा मानन्धर फिल्मदेखि अलि टाढिएकी छिन् । तर, संजोग कस्तो भने आगामी २३ चैतमा उनी अभिनित दुई फिल्म एकसाथ रिलिज हुँदैछ । ‘हिरोज’मा उनको लामै रोल छ भने ‘तिमीसँग’मा चाहिँ एउटामात्र गीतमा देखिन्छिन् ।
रिलिजको मुखमा आफ्नो फिल्मको प्रमोसन गर्नु हरेक कलाकारको कर्तव्य हो । ‘तिमीसँग’ फिल्मको गएको साता गीत रिलिज भयो, तर करिश्मा उक्त इभेन्टमा उपस्थित भइनन् । ‘हिरोज’का लागि उनले आइतबारदेखि मात्र समय दिन थालिन् ।
अघिल्लो साता उनी कुनै पनि इभेन्टमा गइनन् । जाने कुरा पनि भएन । किनभने उनी ९ कक्षाको परीक्षामा भाग लिँदैथिइन् । ‘बल्ल सकियो एक्जाम, अब फ्रि भएकी छु,’ आइतबार हिरोज फिल्मको मिडिया अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले चैनको सास फेरिन् ।
उनले विगत तीन वर्षदेखि स्कुल पढ्न थालेकी हुन् । कक्षा ७ देखि उनको परीक्षा दिने क्रम चलेको हो । ७ कक्षाको परीक्षा उनले नपढीकन दिइन् । ८ कक्षादेखि उनले पढेर परीक्षा दिन थालेकी हुन् । यसपालि उनले ९ कक्षा पूरा गरिन् । उनी मैतीदेवीको त्रिवेणी पब्लिक स्कुलमा अध्ययनरत् छिन् । बेलाबखत कक्षा लिन पुग्छिन् । उनलाई स्कुलले युनिफर्म अनिवार्य गरेको छैन । त्यस्तै मेकअप लगाएरै कक्षामा बस्ने छुट पनि उनले पाएकी छिन् ।
८ कक्षाको जाँच बोर्डबाट दिनुपर्थ्याे । उनलाई एक्जाम सेन्टरमा पुग्दा निकै लाज लागेछ । तर, सेन्टर परेको स्कुलका टिचरहरुले हौसला दिएपछि उनको मनोबल दह्रो भएको थियो ।
‘यसपालि दुई महिना तयारी गरेँ, एक्जामका लागि । राम्रै भयो मेरो एक्जाम,’ उनी ढुक्क छिन्, ‘सायद राम्रै अंक आउँछ होला, हुन त पास फेल हुँदैन । तैपनि ग्रेड राम्रै आउनुपर्छ ।’
स्कुल पढ्दापढ्दै फिल्ममा हाम फालेकीले उनको पढाइ रोकिएको थियो । कलाकारितामा आफ्नो करिश्मा प्रमाणित गरिसकेपछि उनी अमेरिका गइन् । त्यहाँ लगातार १४ वर्ष उनको साधारण जीवन बित्यो ।
‘म बेलाबेला अनौठो अनौठो सपना देख्ने गर्छु, अमेरिकामा हुँदा र नेपालमै आइसकेपछि पनि मैले धेरैपटक युनिफर्म लगाएर स्कुल गएको सपना देख्थेँ,’ उनले सम्झिन्, ‘मलाई पढ्न नपाएको सधैं पछुतो हुन्थ्यो, सायद त्यहीभएर त्यस्तो सपना आएका होलान् ।’
उनलाई लाग्यो, अरुले जेसुकै भनून्, पढ्न जानु पर्छ । उनले यो कुरा सबैभन्दा मिल्ने साथी कोरियोग्राफर गोविन्द राईसँग चुहाइन् । गोविन्दले उनलाई थप हौस्याए । त्यसपछि उनमा स्कुल पढ्ने जाँगर पलाएको हो ।
अब आफ्नो पढाइलाई उनी रोक्ने पक्षमै छैनन् । बाँचुन्जेल पढिरहने दृढता उनमा छ । र, यसमा एउटा इगोले पनि काम गरिरहेको छ ।
‘मेरो पढाइ भर्खर सुरु हुँदै थियो, एकदिन नयाँ शक्ति पार्टीको भेलामा एकजना पिएचडी महिलाले हाम्रो पार्टीमा बेकामे कलाकार पनि छन् भनेर टिप्पणी गर्नुभयो,’ करिश्माको अनुहारमा हल्का आक्रोश फैलियो, ‘मैले उहाँलाई त्यतिबेलै भनेँ, तपाईंले मैले जस्तो ३० वर्ष कलाकारिता गर्न सक्नुहुन्न, तर म तपाईंले जस्तो पिएचडी गरेर देखाउन सक्छु, एकदिन डाक्टर करिश्मा मानन्धर बन्न सक्छु ।’
उनी गोदावरीमा बस्छिन् । घरदेखि स्कुल आइपुग्न उनलाई डेढ घन्टा लाग्छ । त्यसैले ९ बजेको क्लास भेट्न उनी बिहान साढे ७ बजे नै घरबाट हिँड्छिन् । ३ बजेसम्म क्लासमा बस्छिन् । त्यसपछि घर फर्किंदा ५ नै बज्छ । अर्थात् उनको दिन स्कुल आउँदा र जाँदा नै बित्छ ।
किन यति टाढाको स्कुलमा पढ्नुभएको त ? गोदावरीतिरकै स्कुलमा पढ्दा पनि त हुन्थ्यो ? सबैले उनलाई यही प्रश्न सोध्दा रहेछन् । प्रश्न सामान्य भए पनि उनको जवाफ असामान्य छ । भन्छिन्, ‘किनकि म संघर्ष गर्न चाहन्छु । घरछेउकै स्कुलको प्रिन्सिपल मेरै आफन्त छ, तर म त्यस्तो सजिलो बाटो अपनाउन चाहन्नँ, जेहोस् दुःख होस् भन्ने चाहन्छु ।’
पढाइमा ध्यान दिन थालेदेखि उनले पार्टीमा त्यस्तो ठूलो जिम्मेवारी लिएकी छैनन् । हप्तामा पाँच दिन स्कुल, बाँकी दुई दिन पार्टीलाई दिने उनको रुटिन छ । सकेसम्म काठमाडौंबाहिर हुने पार्टीका कार्यक्रमहरुमा जाँदिनन् ।
उनलाई सबैभन्दा गाह्रो विषय म्याथ हो रे । त्यसैले म्याथ र साइन्सको होमवर्कमा उनी छोरीसँग सहयोग माग्छिन् । ‘छोरी निकै कोअपरेटिभ छे, ऊ मेरो पढाइप्रति गर्व गर्छे,’ उनले छोरीको वर्णन गरिन्, ‘बेलाबेला मैले होमवर्क गरिरहेको फोटो सोसियल नेटवर्कमा हालेर ठट्टा पनि गर्छे ।’
अमेरिकाको बसाइँपछि उनलाई अंग्रेजी बोल्न सजिलो भएको हो । स्कुलमा औपचारिक रुपमै अंग्रेजी किताब र ग्रामर पढ्न थालेपछि उनमा झन् आत्मविश्वास पलाएको छ । उनले खुलेरै भनिन्, ‘मलाई इन्डियामा सम्मान गर्दैछन्, त्यहाँ गएर मैले इंग्लिसमै बोल्ने हो । म बोलेर देखाउँछु ।’
Previousभूकम्पपीडितलाई थप १ लाख दिने भनेर देउवा सरकारले हल्ला मात्र गरेको खुलासा
Nextराष्ट्रपतिलाई सर्वोच्चले सोध्यो, पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा के भयो ?
अर्को वर्षदेखि चन्द्रमामा फोरजी कनेक्सन जोडिने
१८ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ०२:५०
महिलाले जन्माईन दुई पुरुषका बच्चा एकै पटक
२७ बैशाख २०७२, आईतवार ०१:५५
तराईमा दिउँसो तीनबजेपछि हावाहुरी चल्न सक्ने
१९ चैत्र २०७५, मंगलवार ०१:४४
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा हावाहुरीसंगै भारी वर्षा,जनजीवन प्रभावित
१२ मंसिर २०७५, बुधबार ००:५७